Ungashandisa FS9 ndege musi FSX?
mubvunzo Ungashandisa FS9 ndege musi FSX?
1 gore 11 ago #248 by JanneAir15
Mhoro! Ndakanzwa kuti unogona kushandisa FS9 ndege musi FSX. Ndine chaiyo ndege kuti haugoni kuwana kuti FSX saka ndinoda kuziva zvinobvira kurishandisa pamusoro FSX. Ndege ndiyo Project Airbus A321 Sharklet shanduro. I kare vakaedza dzimwe nzira yokugadza nayo asi havana vakashanda. Saka aigona munhu ndapota ndibatsirei iyi?
1 gore 11 ago #252 by Gh0stRider203
Hongu unokwanisa. vamwe folders angava zvishoma yakasiyana musi FSX pane FS9. musi FSX, ndege yangu yose kuenda pano:
B: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X \_ SimObjects \_ ndege
Handina kurangarira kwadziri gadza pamusoro FS9. Uyewo chete akanaka yambiro. NOT gauges zvose nokuda FS9 achashanda pamwe FSX.
Time chokusika peji: 0.614 mumasekonzi